တရုတ်နောက်ကျောကိုယ်ဟန်အနေအထားပြုပြင်ပခုံးထောက်ခံမှုသတ္တုတွင်းခါးပတ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း | ကွမ်းခြံကုန်း
ပစ္စည်းအခြား, Neoprene, သံလိုက်ကျောက်ခဲများ, elastic ကြိုးများ, သားရေ
အသွင်အပြင်:Breathable, Elastic, သင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုတိုးတက်စေသည်
ထုတ်ကုန်အမည်:နောက်သို့ကျောထောက်နောက်ခံ Corrector Shoulder Support Brace Belt
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား:တစ်လလျှင် 60000 အပိုင်းအစ / အပိုင်းအစများ
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် 60000 အပိုင်းအစ / အပိုင်းအစများ
အရည်အသွေးမကောင်းတဲ့ကျော Lumbar ပံ့ပိုးမှုခါးပတ်သည်အောက်ပိုင်းနှင့်နောက်ကျောနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဝတ်ထားBack အထောက်အပံ့နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ပခုံးပြတ်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အနိမ့်နောက်ကျောထောက်ခံမှုခါးပတ်ညှိနိုင်သောသံလိုက်ကိုယ်ဟန်အနေအထားပြင်ဆင်ခြင်းကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒဏ်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဇီဝကမ္မကုထုံးပညာရှင်များကအကြံပြုသည်။ elastic သိုင်းကြိုးသည်သင့်အားနောက်ထပ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ထောက်ကူမှုပေးသည့်ဒိုင်းလွှားကိုပေးလိမ့်မည်။ အရည်အသွေးမြင့် neoprene မှပေးသောကုထုံးအပူသည်သံလိုက် ၈ လုံးနှင့်အတူကြွက်သားချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည်: နောက်ကျောကိုယ်ဟန် corrector ပခုံးပံ့ပိုးမှုသတ္တုတွင်းခါးပတ် ပစ္စည်းအမှတ်။ : AFT-B003 ပစ္စည်း: Neoprene, elastic, PP strip, adjustable Shoulder Strap အရောင်: ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင် အရွယ်အစား: Unisize ကဘ - 0.24kg / pc အရှည်: 86cm အကျယ်: 42cm အထုပ် - ၁ pc / opp အိတ်၊ ၁၀၀ အိတ်၊ Carton အရွယ်အစား - ၃၆ * ၃၈ * ၇၂ စင်တီမီတာ လက်မှတ်: CE / FDA / ISO9001 / ISO13485
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရိုးအထူးကုထုတ်ကုန်များတွင်ကျွမ်းကျင်သည် ဒူးထောက် ပံ့ပိုးမှု, ခါးနောက်ကျောသတ္တုတွင်းပံ့ပိုးမှု, ကိုယ်ဟန်အနေအထား Corrector, Wrist Brace Support, တံတောင်ဆစ်သတ္တုတွင်း ပံ့ပိုးမှုစင်တာ ခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ်Support, Shoulder Brace Support, Neck Brace Support စသည်ဖြင့်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ feature ဝန်ဆောင်မှု၏တ ဦး တည်းအမိန့်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဒီဇိုင်းတံဆိပ်နှင့်အရောင်သေတ္တာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်!
စံပြရှာဖွေနေသည် နောက်ကျောကိုယ်ဟန်အနေအထား Correctorထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း? သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျောထောက်နောက်ခံပခုံးပခုံးပံ့ပိုးမှုသွင်ပြင်အားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောရိုးကိုယ်ဟန်အနေအထားရှိတရုတ်မူလစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
နောက်ကျောကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်သော clavicle ထောက်ခံမှုခ ...
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပြန်ထောက်ခံအင်္ကျီကိုယ်ဟန်အနေအထားဆုံးမခြင်းb...